DAGAALKA SUUQA: Liverpool, Man City, Chelsea, Real Madrid, Barcelona Iyo Man United Oo Ku Dagaallamaya HAL Ciyaaartoy - Gool24.Net
DAGAALKA SUUQA: Liverpool, Man City, Chelsea, Real Madrid, Barcelona Iyo Man United Oo Ku Dagaallamaya HAL Ciyaaartoy
February 13, 2020 Abdiwahab A. Abeye
Kooxaha ugu waaweyn dunida ayaa ayaa u xadhko xidhanaya mid ka mid ah dagaalladii ugu adkaa ee suuqa, waxaanay foodda isku gelin doonaan xiddig da’ yar oo la rumaysan yahay inuu leeyahay mustaqbal ciyaareed.
Liverpool ayaa diyaarsatay £100 milyan oo Gini oo ay doonayso inay ugu guuleysato saxeexa laacibkan, laakiin Manchester City oo qaab-ciyaareed liita la timid xili ciyaareedkan ayaa wax walba diyaarsatay si ay u noqoto kooxda gacanta ku dhigtay xiddigan, balse kalideed maaha.
Kooxaha reer England ee Manchester United iyo Chelsea ayaa iyaguna bangiyadooda u jabin doona sidii ay u heli lahaayeen ciyaaryahanno tayo badan oo xili ciyaareedka dambe ay ku dagaal-galaan, waxaanu qorshahoodu yahay in xiddiga ay calmadeen Liverpool iyo Manchester City ee ay lacagta badan u diyaarsanayaan ay iyaguna kula biiraan loollankiisa.
Afarta kooxood ee Ingiriiska ah, waxa iyaguna kusoo biiray labada kooxood ee reer Spain ee Real Madrid oo raadinaysa beddelkii Cristiano Ronaldo iyo Barcelona oo hoos u dhac lama filaan ah ku yimid xili ciyaareedkan.
Xiddiga sidan la isugu haysto, waa 19 jirka u dhashay waddanka Ingiriiska ee afka hore uga ciyaara kooxda Borussia Dortmund, kaas oo qiimihiisu maalinba maalinta ka dambaysa sare usii kacaya.
Wargeyska Dail Mail, ayaa waxa uu sheegay in lixdan kooxood ay dagaalka laacibkan diyaar u yihiin oo ay xagaaga ku kala calaf-qaadi doonaan.
Manchester United oo ahayd kooxda sida ugu weyn loola xidhiidhiyey xagaagii tegay, ayaa markan la sheegayaa in aanay hoggaaminaynin saxeexa laacibkan.
Wargeyska Telegraph ee kasoo baxa UK, ayaa isaguna sheegay in Borussia Dortmund ay xilli horeba go’aan ku gaadhay inay xagaaga ogolaato in Sancho uu ka baxo, isla markaana ay lacag badan dhaafsato.
Si kastba ha ahaatee, Sancho ayaa waxa uu ka mid yahay hantida ugu qaalisan ee suuqa iibka ciyaartoyga laga heli karo xagaaga soo aaddan.